Agenda Civil Guard 2022 ▷ ku cusbooneysii HALKAN! | Sameynta iyo daraasadaha
Ajandaha Ilaalinta Madaniga
Waxay u muuqataa in sanadihii la soo dhaafay, had iyo jeer loo yeero Imtixaanno tartan ah oo loogu talagalay Ciidanka Madaniga ah, miisaankiisa ama jagooyinkeeda kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay faa iidada ah in sanad ilaa sanadka xiga, labada wicitaan iyo taariikha imtixaanku ay u ekaadaan waxoogaa xoogaa ah. Marka waxaan durbaba helnay fikrad ah goorta mucaaradkaan la qaban doono.
Ajandayaasha la cusbooneysiiyay ee mucaaradka Rayidka ah
Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan waxyaabaha waxqabadka ah si aad ugu dhaafi karto wicitaanka ilaalada madaniga ah si aad u fudud adigoo u mahadcelinaya manhajka aan cusbooneysiinay iyo qalab dheeri ah oo aan ku baran karno imtixaannada. Tani waa waxyaabaha aan kuu diyaarin karno:
Xirmada keydka ayaa ah tan ugu jaban maxaa yeelay kaliya € 160 waxaad heli doontaa:
Higaadda, cilmu-nafsiga iyo imtixaanka shakhsiyadda
Tijaabi si aad ugu diyaar garowdo imtixaanka
Buugga Luqadda Dibadda (Ingiriis)
Koorsada aasaasiga ah ee internetka
Haddii aad doorbideyso, waxaad waliba iibsan kartaa mid kasta oo ka mid ah badeecadaha kor ku xusan si shaqsi ah adoo gujinaya.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale ku dhammaystiri kartaa tababarkaaga mid ka mid ah alaabtan:
6 bilood oo koorso internetka ah oo loogu talagalay Ilaalada Madaniga. Qiyaasta Cabos iyo Ilaalada
Imtixaanada majaajillada ah
Ogeysiisyada ku saabsan tartamada Ilaalada Madaniga
Bishii Abriil the ugu yeera mucaaradka mucaaradka madaniga ah. Marka sanadka soo socda sidoo kale waxay noqon doontaa agagaarka taariikhahaas. Way kala duwanaan kartaa wax yar dhawr maalmood ama usbuuc ka hor. Wicitaan lahaa wadar ahaan 2.030 meelood oo toos loogu heli karo Escala de Cabos iyo Guards labadaba.
Dhammaan jagooyinkaas oo dhan, 812 waxaa loogu talagalay xirfadlayaal milatari iyo badmaaxiinta Ciidamada Qalabka Sida.
175 meelood oo loogu talagalay ardayda Kulliyadda Ilaalada Dhallinyarada.
1043 meelaha go'an waa lacag la'aan.
Si loo ogaado dhammaan faahfaahinta, waxaa habboon in la dhugto wicitaanka rasmiga ah ee lagu daabacay BOE. Marka wicitaanku soo baxo, waxaa jira 15 maalmood oo shaqo si loo diiwaan geliyo. Dhowr usbuuc ka dib, liisaska ku-meel-gaarka ah ee kuwa la qirtay way soo bixi doonaan. Waxaad haysan doontaa 5 maalmood inaad ku sameyso sheegashooyin haddii aad u aragto inay daruuri tahay.
Shuruudaha looga mid noqonayo ciidanka ilaalada shacabka
Aad haysato dhalasho Isbaanish ah.
In aan laga qaadin xuquuqda madaniga ah.
Haysashada diiwaan dembiyeed.
Ka gaadhay da'da 18 iyo kama badna da'da 40, inta lagu jiro sanadka uu wicitaanku furan yahay.
Inaan lagu kala saarin faylka edbinta ee ka socda adeegga mid ka mid ah Maamulada Dadweynaha.
Lahaanshaha cinwaanka Ka qalinjabiyey waxbarashada dugsiga sare ee khasabka ah ama heer tacliimeed sare.
Ka gudbay koorsada tababarka gaarka ah ee marin u helida wareegyada heerka dhexe.
Lahaanshaha liisanka wadista B.
Aan lahayn tattoos ay ku jiraan muujinta ama sawirrada ka soo horjeedda qiyamka dastuuriga ah ee wax u dhimaya sumcadda Ciidanka Madaniga ah.
Haysashada aqoonta maskaxeed ee loo baahan yahay loona baahan yahay si loo fuliyo qorshooyinka waxbarasho ee kala duwan.
Sida looga mid noqdo Mucaaradka Ilaalada shacabka
Sidaan horay u sheegnay, waxaa jira 15 maalmood oo shaqo oo la awoodo isqorto imtixaanada Ciidanka Madaniga ah. Si loo rasmiyeeyo diiwaangelinta, waxaa lagu sameyn doonaa Xarumaha elektaroonigga ah ee Ilaalada Madaniga, taas oo ah, khadka tooska ah iyo marinkan: https://ingreso.guardiacivil.es
Markaad bogga gasho waa inaad tagtaa 'Soo galid iyo codsi', sidii dhacday sannadkan. Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad isbarayso, markaa waa inaad dabooshaa 'Diiwaangelinta codsadaha cusub'. Shaashad cusub ayaa furi doonta halka aad ka buuxin doonto macluumaadkaaga shaqsiyeed. Iimayl sidoo kale waa loo baahan yahay, maadaama ay gudaheeda ka heli doonto firfircoonaanta koontadaada.
Marka iimaylku ku soo gaadho, waxaad arki doontaa xiriiriye kugu hagaya bogga galitaanka. Halkaas ayaad ku qori doontaa aqoonsigaaga iyo lambarkaaga sirta ah. Waxaad gali doontaa madal waxaadna awoodi doontaa inaad isdiiwaangaliso. Waa in la sheegaa marka lagu daro xogtaada, waxay sidoo kale ku weydiin doonaan macluumaad iyada oo loo marayo shuruudaha aan horay u soo sheegnay. Sidaa awgeed, waa inaad had iyo jeer diyaarisaa dukumiintiyada kahor intaadan bilaabin codsigaaga. Maxay yihiin dukumiintiyada aan u baahanahay?
Dukumiintiyada cadeynaya u qalmidaada si markaa loogu xisaabtamo waqtiga wajiga tartanka.
Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti.
Magaca weyn ee qoyska ama, Shahaadada Adeegga Shaqada Dadweynaha, shaqo doon doon ahaan. Maaddaama labaduba ay na caawin doonaan marka aan bixinayno khidmadaha.
Markaad daboosho wax kasta oo la codsado, nooc ka mid ah soo koobidooda ayaa la soo saaray si aad mar kale u eegi karto iyaga. Markay wax waliba sax yihiin, waxaad aadi doontaa 'heerka'. Saddex nuqul oo ah PDF ama foomka ayaa la soo saaray. Mid aad u qaadan doonto bangiga Bixiyaan khidmadaha (oo noqon doona 11,32 euro), mid kale oo adiga ah iyo mid saddexaad oo loogu talagalay Xarunta Dhexe. Marka waa inaad daabacdaa oo aad tagtaa bangiga. Markaad bixisay, waa inaad dib u gasho madal. Waxaad riixi doontaa 'Bixinta khidmadaha' halkaasna waxaad ku qori doontaa xogta bangiga iyo sidoo kale taariikhda dhigaalka.
Markaad daboosho dhammaan tillaabooyinka oo aad bixiso khidmadaha, ka dib PDF-kii ugu dambeeyay ayaa la soo saaray, sidaa darteed si loo hadlo Waa inaad daabacdaa oo aad ku soo bandhigtaa arjiga iyo nuqulkiisa, oo si sax ah loo saxeexay, mid ka mid ah xafiisyada boostada ee aad ku leedahay meel u dhow si loogu diro Xarunta Dhexe ee Barista Ciidanka Madaniga ah Madrid gudaheeda iyo sidoo kale amarrada kala duwan ama Boostada dhuleed ee Ilaalada Madaniga ah ee lagu daro saldhigyada wicitaanka.
Waxaan helnaa wadar ahaan 25 mowduuc oo aan ugu diyaar garoobeyno mucaaradka Rayidka ah ee ka soo horjeedda. Waxay u qaybsan yihiin saddex baloog halkaas oo arrimaha sharciga la isugu geeyo kuwa dhaqan iyo farsamo-cilmiyeed.
Xannibaadda 1: Mawduucyada Sayniska Sharciga - Mawduucyada 1 illaa 16
Mawduuca 1. Dastuurka Isbaanishka ee 1978. Sifooyinka guud iyo mabaadi'da dhiirigelinta leh. Qaab dhismeedka Cinwaan hordhac ah.
Mawduuca 2. Xuquuqda iyo waajibaadka aasaasiga ah.
Mawduuca 3. Taajka.
Mawduuca 4. Maxkamadaha guud.
Mawduuca 5. Dowlada iyo Maamulka. Xiriirka Dowlada iyo Cortes Generales. Awooda garsoorka.
Mawduuca 6. Abaabulka Gobolka.
Mawduuca 7. Maxkamadda Dastuuriga ah. Dib u habeynta dastuurka.
Mawduuca 8. Sharciga ciqaabta. Fikradda. Mabaadi'da guud ee sharciga. Dembiyada iyo fikradda xun. Mawduucyada iyo ujeeddada dembiga. Dadka masuulka ka ah dambiyada iyo dambiyada fudud. Darajooyinka ciqaabta ee sii wadida dambiyada iyo dembiyada. Wax ka beddelka xaaladaha mas'uuliyadda ciqaabeed.
Mawduuca 9. Dembiyada ka dhanka ah maamulka dawladda. Dembiyada ay galaan mas’uuliyiinta dowladda ee ka dhanka ah dammaanadda dastuurka.
Mawduuca 10. Sharciga Habka Ciqaabta. Xeerka Habka Ciqaabta iyo Habka Ciqaabta. Xukun iyo xukun. Dacwadaha ugu horeeya. Fal dambiyeedka. Fikradda cabashada. Waajibaadka warbixinta. Cabashada: Nidaamyada iyo saamaynta. Cabashada.
Mawduuca 11. Booliska Garsoorka. Qaab dhismeedka. Howlgalka. Qaab.
Mawduuca 12. Xabsi: Kumaa iyo goorma ayey joojin karaan. Waqtiga kama dambaysta ah Habeas corpus nidaamka. Gelitaankii iyo diiwaangelintiiba waa la xiray
Mawduuca 13. Ee Ciidanka iyo Nabad Sugida. Mabaadi'da aasaasiga ah ee waxqabadka. Qodobada guud ee sharciga. Ciidamada Amniga iyo Hay’adaha Dowlada. Hawlaha Kartida. Qaab dhismeedka booliska Spain. Hay'adaha ku tiirsan Dowladda. Hay'adduhu waxay ku tiirsan yihiin ismaamulada iyo bulshada maxalliga ah.
Mawduuca 14. Ciidanka ilaalada shacabka. Dabeecad Milatari. Qaab dhismeedka
Mawduuca 15. Nidaamka Sharciga ah ee Maamulka Dadweynaha iyo Nidaamka Maamulka ee Wadajirka ah Ujeedo. Baaxadda iyo mabaadi'da guud. Ee Maamulka Dowlada iyo xiriirkooda. Xubnaha Kuwa xiiseynaya. Waxqabadka Maamulka Dawlada.
Mawduuca 16. Qodobada maamulka iyo ficillada. Qodobada guud ee ku saabsan habraaca maamulka. Dib u eegista ficillada dacwadaha maamul. Awoodda cunaqabateynta. Mas'uuliyadda Maamulka Dawladda, mas'uuliyiintooda iyo shaqaalaha kale ee adeeggooda ah. Racfaanka muranka-maamul.
Xannibaadda 2: Mawduucyada Mawduucyada Dhaqanka - Mawduucyada 17 illaa 20
Mawduuca 17. Ilaalinta shacabka. Qeexid Saldhig sharci. Ku wargalinta mabaadi'da ilaalinta shacabka. Kaqeybgalayaasha. Kala soocidda xaaladaha degdegga ah. Nidaamka kala sarreynta. Hawlaha ilaalinta madaniga ah.
Mawduuca 18. Ururada caalamiga ah. Isbadal taariikhi ah. Fikradda iyo jilayaasha ururada caalamiga ah. Qoondaynta Dabeecadda, qaabdhismeedka iyo shaqooyinka: Qaramada Midoobay, Golaha Yurub, Midowga Yurub iyo Ururka Waqooyiga Atlaantik.
Mawduuca 19. Xuquuqda Aadanaha. Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha. xuquuqda madaniga, siyaasada, dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka. Heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Guddiga Xuquuqda Aadanaha: Nidaamyada Ilaalinta. Golaha Yurub. Axdiga Turin. Heshiiska Rome: Nidaamyada Ilaalinta.
Mawduuca 20. Cilmiga deegaanka Hawlaha xiriirka ee noolaha. Deegaanka. Isirrada jirka: Ciida, iftiinka, heerkulka iyo huurka. Isirrada nafleyda. Jaaliyado. Tirada iyo bulshada. Nidaamka deegaanka. Qaybaha. Noocyada: Dhul ahaan iyo biyo ahaanba. Isku dheelitirka deegaanka. Ku xadgudubka deegaanka. Wasakhaynta. Qashinka.
Xannibaadda C: Mawduucyada Mawduucyada Farsamada-Sayniska - Mawduucyada 21 illaa 25
Mawduuca 21. Korontada iyo electromagnetism. Xilliga korantada. Xiisad, xoojin iyo iska caabin. Sharciga Ohm. Isutagga qaybaha korantada. Xiisad kacsan. Tamarta korantada. Awooda korontada. Magnetism. Baaxadda birlabta Qulqulka magnetic. Baaxadda Magnetic. Baaxadda birlabta oo ay abuureen korantada. Solenoid, elektromagnet iyo gudbinta. Xoog koronto-dhaliye. Is-induction xoog koronto-dhaliye.
Mawduuca 22. Idaacadaha. Qaybaha isgaarsiinta. Muuqaalka soo noqnoqda. Mesh concept iyo kanaalka shaqada. Dhibaatooyinka isku xidhka mesh ee VHF iyo UHF. Adeegyada isticmaalaha ama qaababka shaqada. Raadiyaha idaacadaha iyo qaatayaasha (AM iyo FM). Qalabka ku soo celinta. Hirarka elektromagnetic. Faafinta iyo baaxadda. Anteenooyinka Ilaha awooda.
Mawduuca 23. Motoring. Farsamada baabuurta. Mashiinnada: Fasallada. Silsilado Waqti. Dejinta. Mashiinka naaftada. Bistoolad Isku xidhka usha Crankshaft. Gawaarida isteerinka. Sump Mashiinka laba-istaroogga ah. Awood siinta gubashada gudaha iyo matoorada naaftada ah. Saliidaynta Qaboojiyaha. Hababka gudbinta. Hakinta Jihada. Biriigyada Gawaarida korontada. Nidaamyada dabka. Dynamo. Beddelaha Durbaan. Bilaabida mootada Qaybinta.
Mawduuca 24. Xisaabinta. Hordhac wargelin ah. Hawlaha iyo wejiyada nidaamka xogta. Kombuyuutarka iyo qaybtiisa, xisaabinta iyo soo saarkeeda. Fikradda barnaamijka iyo noocyada. Fikradda nidaamka qalliinka iyo shaqooyinkiisa. Kaydinta macluumaadka: Fikradda feylka.
Mawduuca 25. Muuqaalka dhulka. Cilmiga juqraafiyeed: Dhulka dhidibka, tiirarka, meeriska, isbarbarya, dhulbaraha, dhibcaha kadinal, iskuduwaha juqraafi, azimuth iyo dhalista. Halbeegyada joomatari ee cabbirka: halbeegyo toosan, cabbir iyo qiyaaso garaafyo, cutubyo xagal ah. Matalaadda dhulka.
Tijaabooyin inuu noqdo Ilaalada Madaniga ah
Midka hore imtixaannada teori waa higgaadin. Tijaabadu waxay socotaa 10 daqiiqo waxayna ku saleysan tahay layli higaada. Qeybtaan waxaa loo dhaliyay 'Pass' ama 'Ma Taam'. Haddii 11 ama ka badan khalad qalad ah la sameeyo markaa waxaad 'U Qalmid Maaha'
La imtixaanka aqoonta waa xulasho badan oo leh 100 su'aalood iyo 5 boos celin ah. Si aad u sameyso baaritaankaan waxaad haysataa 1 h 35 daqiiqo. Su’aal kasta oo aad saxdo waxay noqoneysaa qodob. Laakiin xusuusnow in kuwa sida khaldan uga jawaaba ay leeyihiin ciqaab. Markaa markii shaki ku jiro markasta way fiicantahay inaad ka tagto meel madhan. Halkan, waa inaad gaartid 50 dhibcood si aad ugu gudubto. Haddii kale, waa lagaa reebi doonaa howsha.
La imtixaanka afka qalaad Waxay ka kooban tahay ka jawaabidda su'aalaha 20-su'aalood iyo su'aal keyd ah. Waqtiga ay tahay inaad fuliso waa 21 daqiiqo. Si aad uga gudubto waxaad u baahan tahay 8 dhibcood, maaddaama lagu qiimeeyo 0 illaa 20 dhibcood.
Waxaan imaanay imtixaanka cilmu-nafsiga halkaas oo lagu qiimeeyo awooda codsadayaasha si ay ula jaan qaadaan shuruudaha la dalbaday. Tijaabadani waxay leedahay laba qaybood:
Xirfadaha caqliga: Imtixaanka sirdoonka ama miisaanka gaarka ah, ee u adeega qiimeynta awooda barashada.
Shakhsiyadda qofka: Sidoo kale ku saleysan imtixaannada maareynaya sahaminta astaamaha shakhsiyadda.
Xusuusnow in si loo fuliyo dhammaan tijaabooyinka qoran qalin qalin madow loo baahan yahay, sida lagu sheegay saldhigyada.
Ugu dambeyntii, waxaan leenahay wareysi shakhsi ah taas oo loogu talagalay in lagu kala saaro natiijooyinka dhakhaatiirta cilmu-nafsiga. Waxay raadinayaan sifooyin dhiirrigelin ah iyo sidoo kale bisayl iyo masuuliyad, dabacsanaan iyo in murashaxu ogyahay sida loo xalliyo dhibaatooyinka qaarkood ee soo baxa.
Maalinta Tijaabooyinka jirkaWaa inaad sidataa shahaadada caafimaadka ee caddaynaysa inaad uqalanto inaad fuliso. Waa in la soo saaraa 20 maalmood ka hor dhammaystirka imtixaanadan. Amarkooda iyaga ayaa soo jeedin doona Maxkamad, laakiin sidaas oo ay tahay, kuwa jireed ee ay tahay inaad ka gudubto waa kuwan soo socda:
Tijaabada Xawaaraha: Tartan 50-mitir ah oo lagaa rabo inaad sameyso adigoon ka dhaafin waqtiga 8,30 ilbiriqsi ragga iyo 9,40 ilbiriqsi oo dumarka ah.
Imtixaanka dulqaadashada muruqyada: Tani waa tartan 1000 mitir ah oo ku socda wadada. Waqtiga la fulinayo waa inaysan ka badnaan 4 daqiiqo iyo 10 ilbidhiqsi ragga ama 4 daqiiqo iyo 50 ilbidhiqsi oo dumarka ah.
Gacanta qalabka wax lagu dheereeyo: Waxay ka bilaabmaysaa booska u nugul iyo gacmaha oo ku toosan dabaqa. Meeshan laga bilaabo gacmo fidsan oo buuxa ayaa laga sameeyaa. Ugu yaraan waxaa jira 18 rag ah iyo 14 haween ah.
Imtixaanka dabaasha: Waxaad u safri doontaa barkadda barkadda 50 mitir. Waxaad leedahay hal isku day mana awoodi doontid inaad ka badato 70 sekan hadaad nin tahay ama 75 ilbiriqsi hadaad dumar tahay.
Imtixaanku wuxuu leeyahay laba qaybood oo caalami ah. Dhinac waa kan wajiga mucaaradka. Halkaas waxaan ka heli doonnaa imtixaanno kala duwan ama imtixaanno sida:
Qeybtan ugu dambeysa sidoo kale waxaa loo qaybiyaa:
Imtixaanka jir dhiska
Qaybta labaad ee imtixaanku waxay ku saabsan tahay wajiga tartanka, oo leh dhibco u dhexeeya 0 iyo 40 dhibcood. Ujeeddadeedu waa in la qiimeeyo mudnaanta.
Mucaaradka ilaalada madaniga ahi ma adag yihiin?
Waa run inay wax isbadaleen. Sababtoo ah dhawr sano ka hor ayaa la sheegay in mucaaradka Ilaalada madaniga waxyar ka fudud. Laakiin maanta waxaa jira dad badan oo isa soo taraya oo dhibka uu ku kala duwanaa. Tani ma muujineyso inaysan macquul aheyn, laakiin waxay muujineysaa inay tahay inay si taxaddar leh u diyaargaroobaan.
Shaki la'aan, markaan kahadleyno dhibaatada, waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn ku yeelan kara. Saacadaha daraasadda iyo saacadaha jimicsiga jirka ayaa go'aamin doona jawaabta ugu dambeysa. Waxaan u baahanahay inaan abaabulno waqtiga si aan awoodno diyaari ajandaha, laakiin adigoon ilaawin dhaqdhaqaaqa jirka. Marka waa inaan markasta dhisnaa dheelitirnaan wanaagsan oo aan wax badan ka qabannaa daciifnimada uu qof walba leeyahay. Waxay noqon doontaa dadaal waxtar leh oo leh meel go'an oo nolosha ah.